ဒေါ်လာသန်း(၅၀၀)ကုန်ကျမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအစီအစဉ် မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ဖော် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဦးဌေးအောင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
Posted on June 6, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ ဇွန်- ၆ ရက်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သည်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)နော်ဝေနိုင် ငံ အစိုးရတို့နှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ပေါင်း (၂၁)ခုကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဒေါ်လာသန်း (၅၀၀) ကုန်ကျမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မဟာစီမံကိန်းတစ်ခုကို ထုတ်ဖော် လိုက်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ကိုင်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသည့်ဒေသများအား ကာကွယ်ရန်နှင့် တိုင်းရင်း သားပြည်သူလူထုအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နိုင်ရန်အတွက် အထောက် အကူပြု မည်ဖြစ် ပါသည်။
အဆိုပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မဟာစီမံကိန်း ထုတ်ဖော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား ယနေ့နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်၊ အမရဟိုတယ် ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပင်မစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Prof.Dr. Paul Rogers နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Stephen Groff တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် ယခုမဟာစီမံကိန်း၏ အဓိက အချက်မှာ“ မြန်မာနိုင်ငံ၏ထူးခြားသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များကို မပျက်စီး၊ အန္တရာယ်မကျရောက်စေဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း အား ကြိုဆိုခြင်း ´´ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်း ပါက နိုင်ငံတကာ မှ နိုင်ငံခြား သားဧည့်သည်လာရောက် လည်ပတ်မှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင် (၇.၅)သန်းအထိ တိုးမြှင့်လာပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အလုပ်အကိုင်ပေါင်း (၁.၄)သန်းခန့် စီမံပေးနိုင် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်း လင်းပြောကြားသည်။
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Stephen Groff ရှင်းလင်းပြောကြား ရာတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအတွက် အဓိကဒေါက်တိုင် တစ်ခု ဖြစ် လာမှာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲ သောဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူ လူထုအပါ အ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ သားများအတွက် လေးနက်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် အလား အလာရှိပါကြောင်း၊ ယခုဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မှာ ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ တစ်ဆင့် လူမှုရေးနှင့် စီပွားရေးကဏ္ဍများ ညီတူညီမျှ တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အတွက်ခိုင်မာသော အစပျိုး မှုများ ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့အသစ် ဖွဲ့စည်းရန် ဖော်ပြထားပြီး အဆိုပါအဖွဲ့သည် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်သာမက ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် လိင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း များအား တားဆီးရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် ဒေသခံလုပ်သားပြည်သူများ သည် နိုင်ငံခြား သားခရီးသွားဧည့်သည်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ရောက်ရှိလာပါက စနစ်တကျ ကိုင် တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် ၄င်းတို့၏ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင် ရန်အတွက် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့် လူထုအခြေပြု ခရီးသွား လုပ်ငန်း စမ်းသပ်စီမံကိန်းများအား လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြု ထားပါသည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ CNA, RFA, MRTV, MI, Sky Net ရုပ်သံလိုင်း သတင်းထောက် များနှင့် TheVoice,The Daily Eleven News,7Day,Myanmar Times,Nikkei, May Myanmar,Street View Journel,Peninsula Press ဂျာနယ်သတင်းထောက် များ တက်ရောက်ကြပြီး သိရှိလို သည်များအား မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်၊ Prof.Dr. Paul Rogers နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Stephen Groff တို့မှ ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Posted on May 30, 2013 by admin	.
Union Minister H.E. U Htay Aung attended the closing ceremony of Hotel Servicing Course (11/2013) at Nay Pyi Taw hotel zone that supervised by Ministry of Hotels and Tourism and led by Nay Pyi Taw hoteliers association and madeaclosing speech.
After that, Union Minister said that World Economic Forum, East Asia will be held in June 2013, it makes us proud because it is the first international forum that held in Myanmar and make noticeable among other countries, aid tourism sector of Myanmar and can get some suggestions for the development of Myanmar’s economic, can get some experiences for 27th SEA Games and serving as ASEAN’s chairman in 2014, that trainees should give hospitable service and need to use training experience at working field wisely and must try to continue higher studying for more further development to become efficient employees, need to attract the visitors by giving excellent serving to come back again and again.
After that, Union Minister gave prizes to four brilliant trainees and gave training certificate toatrainee instead of other trainees. Continued, vice president of Nay Pyi Taw Hotelier Association, U Sai Tip Aung gave honorable gift to instructors and finished closing ceremony.
Directorate of Hotels and Tourism, Director General and official concerned, vice president of Nay Pyi Taw hotelier association and concerned, instructors and trainees from training school attended the ceremony.
(နေပြည်တော်၊ မေ- ၃၀ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများအမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၃)သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မှာကြား
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်၍ နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန် ဟိုတယ် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့်ဖွင့်လှစ်သော ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင် တန်းများ အမှတ် စဉ်(၁၁/၂၀၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက် (၀၈း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်၊ မြတ်မင်္ဂလာဟိုတယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် ရာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်း အမှာ စကားပြောကြားသည်။
၄င်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆက်လက်မှာကြားရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၌ နေပြည်တော် တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် အရှေ့အာရှကို ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းဖိုရမ် သည် မြန် မာနိုင်ငံ တွင် ပထမဆုံးကျင်းပသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်ဖိုရမ်ဖြစ်ရာ မိမိတို့အားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် စရာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာကပိုမိုသိရှိလာခြင်း၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပညာရှင် များ ထံမှ အကြံဥာဏ်များ ရရှိခြင်း၊ (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဌအလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တို့အတွက် အတွေ့အကြုံများ ရယူနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတွက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း များ အားလုံးအနေနှင့် ဧည့်ဝတ်ကျေ ပွန်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပြုရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ သင်တန်းသား များအနေဖြင့် မိမိတို့သင်ယူ တတ်မြောက်ပြီး သည့် ပညာရပ်အတွေ့အကြုံများကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး ပညာရပ်တိုးပွားရေးနှင့် အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များကိုလည်း ထပ်မံဆည်း ပူးလေ့လာနိုင်ရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ကျွမ်း ကျင်သော ၀န်ထမ်းကောင်းများဖြစ်အောင်၊ လာရောက် တည်းခိုသည့် ဧည့်သည်များ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်လာရောက် လည်ပတ်စေနိုင်ရန် မှန်ကန်ကောင်း မွန်သော ၀န်ဆောင်မှု များဖြင့် ဆွဲဆောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း မှာကြားသည်။
၄င်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် သင်တန်းအလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသော သင်တန်းသား၊ သင်တန်း သူ(၄)ဦးအား ထူးချွန်ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီး သင်တန်းသား/သူများကိုယ်စား သင်တန်းသူ တစ်ဦးအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နေပြည်တော် ဟိုတယ် ဇုန် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစိုင်းတစ်အောင် မှ သင်တန်း နည်းပြများအား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီး သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားအား ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။
အဆိုပါသင်တန်းဆင်းပွဲသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဌာန တာဝန်ခံအရာရှိများ၊ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ နှင့် တာဝန်ရှိ သူများ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းနည်းပြများနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted on May 30, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ မေ- ၃၀ ရက်)
ဂျာမဏီနိုင်ငံအခြေစိုက် Hanns Seidel Foundation နှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဌာန တို့အကြား ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား အား ယနေ့နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန ၊ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ၏ ဧည့်ခမ်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ အခြေစိုက် Hanns Seidel Foundation တို့အကြား တာဝန်သိ၍ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ကွန်ဖရင့်များနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပရေး ကိစ္စများတွင် ထောက်ပံ့ကူညီပေးရန်၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများတွင် နည်းပညာနှင့် ငွေကြေး ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များကို Hanns Seidel Foundation မှ ထောက်ပံ့ပေးရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုစီမံကိန်းများအား အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ပေါ် တွင် နိုင်ငံတကာနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ချမှတ်ထားသည့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန် စသည့်အချက်များပါဝင်၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်းနှင့် Hanns Seidel Foundation မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Mr. Achim Munz တို့မှ သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးကြပါသည်။
အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ နှင့် ဌာနတာဝန်ခံအရာရှိများ၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Ludwig Weber Lortsch တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted on May 23, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ မေ- ၂၂ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေနှင့် ဆက်လက်ဆောင် ရွက်မည့် လုပ်ငန်း စဉ်များ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ယနေ့နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ ကျောက် စိမ်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍသည်ကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းအမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်၍ မိမိဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ မရပါကြောင်း၊ အခြားဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာန များ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍများဖြင့် ဆက်စပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပြီး အများ အားဖြင့် ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ မှာ အများဆုံးပါဝင်နေပါကြောင်း ၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် စတုတ္ထအဆင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဖြစ် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမူဝါဒများ ချ မှတ်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် အသင်းအဖွဲ့များ ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည့် အတွက်မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ပြန်လည် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အသင်း ဖွဲ့စည်း ထူထောင်နိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းပုဂ္ဂလိက အသင်းအဖွဲ့ များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအင်အားကိုရယူ၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအနေဖြင့်လည်း မိမိ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍကို သေချာစွာသိရှိအောင်လေ့လာ၍ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်အောင် လေ့လာဆည်းပူး ကြိုးစားဆောင်ရွက်စေ လိုကြောင်း မှာကြားသည်။
၄င်းနောက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့ ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလုပ်ငန်းတို့မှ ဌာနအလိုက်တာဝန်ခံအရာရှိများနှင့် နယ်ရုံးခွဲတာဝန်ခံများမှ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလအထိ လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ခေတ္တ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီး တို့မှ ဖြည့်စွက်ရှင်း လင်းတင်ပြဆွေးနွေး သည်။
၄င်းနောက် ဌာနအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များး လမ်းညွှန်မှာကြားကာ အစည်းအဝေးအား ရုတ်သိမ်းလိုက် သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဌာနဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခေတ္တ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဌာနတာဝန်ခံအရာရှိများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။